SomaliaReport: Al-Shabaab oo Soo Xoojisay Muqdisho
Ugu yaraan 500 oo dagaalyahano ka tirsan ururka Al-shabaab ah ayaa soo galay magaalada Muqdisho si ay u xojiyaan aagagga ay dagaalka kula jiraan ciidamada dawladda ku meel gaadhka ah o garabsanaya kuwa nabad-ilaalinta ee AMISOM. Waxaa sidoo kale manta la khafaalay ilaa 100 dhalinyaro ah oo logu talo galay inay ka dagaal galaan furiimaha Muqdisho.
Saraakiil ka tirsan Al-shabaab ayaa u sheegay wargayska Somalia Repoort in ciidamadan loo kala diray dinacyada Muqdisho ka dib markii ay tababaro u socday ku soo dhamaysteen meelaha ay malaysiyada Al-shabaab ka taliso ee gobolada dhexe iyo koonfurta.
Dadka deegaanka Muqdisho ayaa wargayska Somalia Report u sheegay inay maanta duhurnimadii ay ilaa saddex gawaadhida Milatariga ah o waday dagaalyahano ururka ka tirsani ay ka so galeen dhanka Afgooye, waxaana dhinacyada waddooyinka taagnaa oo so dhawaynayey dablay kale oo ka tirsan ururka Al-shabaab.
Ciidamadan ayaa intooda badani laga keenay gobolada shabeelada hoose, Bay iyo Bakool. Koox waxaa loogu talo galay inay ka hawlgalaan waqooyiga Muqdisho, halka kuwa kalena la dhigi doono xaafadaha Hodan iyo Hawlwadaag halkaas oo ay ciidamada AMISOM ka sameeyeen horumar la taaban karo isla markaana ay xidheen suuqii waynaa ee Bakaaraha o malaysiyada Al-shabaab u ahaa saldhig wayn. Waxaa ku naf waayey dagaaladaa shacab badan o ay dishay xabadiohii la is dhaafsanayey.
AMISOM ayaa iyadu sheegatay inay gacanta ku hayso 60% magaalada Muqdisho, iyada oo ka faa’iidaysanaysa fursadahaasna waxay soo raraysaa shaqaalaha ku sugan Nairobi oo la keenayo Muqdisho.
Dhalinyaro La Afduubay Si Ay u Dagaalamaan.
Wargayska Somalia Report ayaa sugaya inay maanta Al;-shabaab xaafadda la yidhaa Ceel Cirfiid oo 5km u jirta Muqdisho ka khafaasheen ilaa 100 dhalinyaro ah, si ay uga hawlgalaan xaafadaha Hodan,Hawlwadaag,Shibis iyo Boondheere.
Cali Cosoble o ah dadka deegaanka ayaa sheegay inay Al-shabaab xoog ku kaxaysanayso dhalinyarada si ay uga dagaal galiyaan meelihii ay lumiyeen ee ay ciidamada dawladda taabacsan weeraradii u danbeeyey kala wareegeen.
“Kuwa la khafaashay ayaa lagu qasbaa inay ciidamada dawladda ku meel gaadhka ah la galaan dagaal aysan micnihiisa fahansanayn” ayuu yidhi Cosoble.
“Afhayeenka Al-shabaab Cali Maxamed Raage iyo ciidan al socday ayaa yimid iskuul ku yiilay magaalada Kismaayo bisii Febraayo, waxayna ka kaxeeyeen ilaa 30 askari oo ay u kaxeeyeen magaalada Garbaharey si ay ugu soo qaataan tababaro khaas ah” Cadi Jamaal oo ka mid ah duqayda deegaanka Kismaayo ayaa sidaa u sheegay wargayska Somalia Report.
“Al-shabaab ayaa iyadu kula kacda shacabka dhaqamo aad u guracan sida gacan goys, madax jaris iyo dil fagaaraha lagu sameeyo iyo ciqaabyo aad u qalafsan, dadkuna ma laha ikhtiyaar, waxayna ku qasban yihin inay u hoggaansamaan. Mid ka mid ah duqayda magaalada Muqdisho ayaa sidaa u sheegay wargayska Somalia Report.
Ururka Al-shabaab ayaa bilihii la so dhaafay xoog ku kaxaysanayey dhalinyarada iskuulada dhigata iyo duqayda masaajidda ka soo baxda si ay uga qayb qaataan dagaalka ay kula jiraan dawladda.